RASMI: Mohamed Salah oo ku guuleystay abaal-marinta Kabta Dahabka ee gool-dhalinta Premier League… + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Mohamed Salah oo ku guuleystay abaal-marinta Kabta Dahabka ee gool-dhalinta Premier League… + SAWIRRO
Byare May 13, 2018
(Liverpool) 13 Maajo 2018. Dhaliyaha kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa ku guuleystay abaal-marinta Kabta Dahabka ah ee gool dhaliyaha ugu sarreeya horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2017-18.
Horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan ayaa maanta la soo gabagabeeyey Salah ayaana gool ugu shubay kooxda Brighton and Hove Albion, markaasoo uu dhaliyey goolkisii 32-aad ee kal ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Salah ayaana abaal-marinta ku muteystay 32-ka gool ee uu xilli ciyaareedkan 2017-18 ka dhaliyey horyaalka xiisaha leh ee English Premier League.
Xiddiga xulka qaranka Masar ee Mohamed Salah ayaa abaal-marinta Kabta Dahabka ee la siiyo ciyaaryahanka goolasha ugu badan xilli ciyaareedka ka dhaliya horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxa uu ku garaacay Weeraryahanka kooxda Tottenham ee Harry Kane oo dhaliyey 30 gool iyo Sergio Agüero oo ka tirsan Manchester City kaasoo dhaliyey 21 gool.
Waxaa 25-sano jirkaan abaal-marinta Kabta dahabka ah ee gool-dhalinta Premier League lagu dhex-guddoosiyey maanta garoonka Anfield, isagoo Jamaahiirta kooxdiisa Reds hortooda sare ugu qaaday abaal-marintan.
Unai Emery Oo Qeyb Kasoo Noqday Musharaxiinta Ugu Cad Cad Badalka Wenger Ee Kooxda Arsenal
Jose Mourinho “Ma Jirto Cid Buuxin Karta Booska Uu Ka Baxay Rui Faria”